कसरी अमेरिका जान्छ? आधुनिक संसारमा यस्तो प्रश्न असामान्य छैन। यो देश सधैँ र धेरै पर्यटकहरु र शरणार्थियों संग आप्रवासीहरु को लागि आकर्षण को स्थान जारी छ।
यदि तपाइँ यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो भने, यसको अर्थ हो कि तपाई सम्भवतः पहिले नै सजग हुनुहुन्छ कि तपाईं यस देशमा भिसाको विशाल संख्यामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, र एक अमेरिकी भिसा एक जटिल प्रक्रिया हो र अक्सर एक पूर्ण अवशेषमा समाप्त हुन्छ (राम्रो छ, तिनीहरूले हाम्रो भाइमाथि भरोसा गर्दैनन् !)।
म सुझाव दिन्छु कि तपाई आफैलाई धेरै विकल्पहरूसँग परिचित गराउनुहुन्छ, र लेख पढ्न पछि तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ कि कुन विधि तपाईंको लागि सही छ।
कसरी अमेरिका जान्छ? विधि संख्या 1।
युवा कार्यक्रम "काम र यात्रा युएसए", जुन रूसी अनुवादमा "युएसएएसका लागि कार्य र यात्रा" जस्तो लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी विनिमयको उद्देश्य हो। ग्रीष्मका बिदाहरूमा, सबै सहभागीहरूले कानूनी रूपमा काम गर्न र स्थानीय आकर्षणहरूलाई भ्रमण गर्न राज्यको क्षेत्रमा पाँच महिनासम्म रहन सक्छन्। यदि तपाईं यो कार्यक्रममा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ एक सम्बद्ध विद्यालयको एक सोसाइटी छात्र हुनु पर्छ र अंग्रेजीको राम्रो आदेश छ।
कसरी अमेरिका जान्छ? विधि संख्या2। हराएको ग्रीन कार्ड लटरी।
यो मलाई लाग््छ कि तपाईं यस कार्यक्रम को बारे मा सुन्न सक्दैन, हरेक वर्ष अमेरिकी सरकार द्वारा व्यवस्था गरिएको छ। र सोच्नुहोस् कि यो अर्को चाल हो। होइन! मैले मान्छेहरूलाई सबै पछि भाग्यशाली छन् (धेरै प्रयास पछि, र पहिलो पटक पनि!) जित्नको लागी, र अब धेरै वर्षको लागि तिनीहरू उनीहरूको सपनामा बाँच्न थालेका छन्। निस्सन्देह, यदि तपाईं चाँडै नै सकेसम्म अमेरिकामा फेला पार्न चाहानुहुन्छ भने, यस्तो भ्रामक भाग्यमा गिनतीमा कुनै बिन्दु छैन। तर यो किन प्रयास गर्दैन? साथै, यो प्रक्रिया बिल्कुल नि: शुल्क छ।
वर्षमा एकपटक एकपटक शरद ऋतुमा (मिति परिवर्तनहरू वार्षिक रूपमा, त्यसैले यो अमेरिकी सरकारको वेबसाइटमा जाँच गर्न लायक छ), तपाईंलाई अंग्रेजीमा सरल प्रश्नावली भरिएको छ, यसलाई फोटो जोड्नुहोस् र भाग्यको इच्छाको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। विजेताहरूको नाम सामान्यतया वसन्तमा घोषणा गरिन्छ - अर्को क्यालेन्डर वर्षको गर्मी। तपाईं भाग्यको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ मेल वा इ-मेल बक्समा, वा अद्वितीय कोड प्रविष्टि गरेर जुन पंजीकरणको समयमा जारी गरियो।
कसरी अमेरिका जान्छ? विधि संख्या 3. अतिथि वा पर्यटक पर्यटक।
मैले यी दुई प्रकारका भिसाहरू एक कारणको लागि संयुक्त गरे: तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लगभग एकै छ, त्यसैले सिफारिसहरू समान हुनेछन्।
यदि तपाइँ अमेरिका (आफन्तहरू, साथीहरू, पूर्व कर्मचारीहरू, मा बस्न निमन्त्रणा दिइन्छ भने यसले फरक गर्दैन), तिनीहरूले तपाईंलाई अग्रिममा अतिथि निमन्त्रणा पठाउनुपर्छ। र त्यहाँ एक गलत धारणा छ कि यस्तो कागजातमा धेरै सीलहरू, टिकटहरू र सबै प्रकारको छाप हुनुपर्छ। यो एक भ्रम हो। एउटा ठूलो मात्रामा अनावश्यक टिनल समावेश भएको कागजात, दूतावासको प्रतिनिधिमा संदिग्ध कारणले गर्दा। मनमोहक, यदि तपाईंसँग एकै यौनको व्यक्तिद्वारा आमन्त्रित हुनुहुन्छ भने, संयुक्त राज्यमा तपाईंको सम्भावना विवाहको सन्दर्भमा कुनै प्रश्न छैन।
अमेरिकामा पर्यटक पर्यटक भिसा गर्नु अघि (अतिथि प्रक्रियाको लागि होईन), तपाईंलाई दूतावासको वेबसाइटमा पोस्ट गरेको फारम भर्नु पर्छ। यो अनलाइन र अंग्रेजीमा गरिन्छ। यो कागजात छापिएको छ र तपाईसँग साक्षात्कारमा लिइएको छ।
साक्षात्कार आफै स्वतन्त्र रूपमा लिन्छ। तपाईंलाई कुनै पनि कागजात प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन, तथापि दुर्लभ अवस्थामा तपाईं काम को आफ्नो स्थान बाट वा विवाहको प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्रको लागि सोध्न सकिन्छ। यो केवल सत्य बोल्ने सल्लाह दिइन्छ, तर ती व्यक्तिहरूले पहिले नै यो प्रक्रिया पास गरेको छ भने, तपाइँले काम गर्ने, भन्नु, व्याख्याकर्ता वा अंग्रेजी शिक्षकको रूपमा उल्लेख नगर्न सिफारिस गर्नुहोस्। केहि कारणको लागि, यो मानिन्छ कि यदि व्यक्तिले भाषामा महत्त्वपूर्ण छ र एक वर्षको निश्चित संख्याले यसलाई पूर्ण पारेको छ, विशेषतामा काम गर्दछ, यो केवल सबै उद्देश्यमा अमेरिका जाने उद्देश्य हो। अनि खुसी, दूतावासका कर्मचारीहरूको अनुसार, उनीहरूले उच्च शिक्षा, घरको योग्य विशेषता र घरको अवस्था, एक टेक्सासमा एक पट्टी वा सडकमा क्याफेमा धुलाई धोएर हेर्छन् ... डिल्लीरी। म सहमत छु। तर यो राम्रो हुन सुरक्षित छ ...
यहाँ, सम्भवतः यो सबै छ। त्यहाँ लगानीकर्ता, दुलही, कामदार र धेरै अन्यका लागि भिसा पनि छन्, तर उनीहरूलाई अझ बढी गम्भीर दृष्टिकोण चाहिन्छ, र यस्ता घटनाहरू मात्र व्यक्तिगत रूपमा विचार गर्नुपर्छ।
नयाँ सहस्राब्दीको प्रतीकको रूपमा लन्डनमा फेरिस व्हील र एक हजार वर्षीय शहरको ऐतिहासिक स्थल
रेल "लियो टोलस्टोय" - फिनल्याण्डमा सान्त्वना संग
कसरी Lakinsk भ्रमण गर्ने? मुद्दा सम्बन्धित छ
परम्परा र modernity: मिसिन कसरी बनाउने
Introverts के हुन् र तिनीहरूले अद्भुत छन् कसरी?
जर्मन निष्क्रिय: सही लागू गर्न कसरी
Zviad Arabuli: जीवनी, समीक्षा। बिहान HUD Zviad Arabuli, जीवन-prolonging अभ्यास
बिक्री कसरी वृद्धि गर्न जान्न चाहनुहुन्छ?
Peeling bodyagi: पुस्तिका र समीक्षा
को एक सदस्य कसरी बन्न र यो स्थितिको लाभ के हो